Baaqyo laga soo saarey dagaalka duleedka Caasimadda Galmudug | KEYDMEDIA ENGLISH
Baaqyo laga soo saarey dagaalka duleedka Caasimadda Galmudug
CC Warsame ayaa sheegay in Galmudug ay leedahay hal cadow, kaasoo ah Al-Shabaab, islamarkaana aan lo baahnayn mid sokeeye.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qaar kamid ah Musharixiinta Madaxtinimada Soomaaliya, ee kasoo jeeda Galmudug ayaa baaq nabadeed kasoo saarey dagaalka duleedka Dhuusamareeb.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa ku baaqey in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, laguna bedelo wadahadal, kahor inta aysan xaalada faraha ka bixin.
Cabdikareen Guuleed: Waxaan ku baaqayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka gobolka Galgaduud, wixii khilaafaad ah waa in lagu xaliyaa wadahadal. Dagaalku wuxuu wiiqayaa awooddii loo midoobi lahaa Al-Shabaab. Reer Galmudug waa inay ka shaqeeyaan nabadda iyo is -afgaradka, taas oo horseedaysa horumar iyo xasilooni.
Dagaalka oo u dhaxeeya Ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna ayaa ka dhacay degaanka Bohool, oo 35KM dhanka waqooyi uga beegan Dhuusamareeb, xarunta Galgaduud.
Inta la xaqiijiyay illaa hadda ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyootay, 20 kalena way ku dhaawacmeen colaadda, oo iskeeda u i istaagtay, waxaana taagan xiisad sabab karta markale inay dhinacyada is fara-saaraan, sida ay sheegeen dadka degaanka.
CC Warsame: Waxaan ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda degaanka Bohol ee Galmudug. Cadowga Galmudug waa Shabaab. Dagaal kasta oo lala galo koox kasta oo aan ahayn Al-Shabaab waxay taageero dadban u tahay argagixisada.
Wuxuu kaloo sheegay in colaadda ay ka weecinayso Galmudug jidka toosan ee nabad iyo horumarka, islamarkaana ay saameynayso doorashadda Aqalka Hoose ee lagu wado inay ka dhacdo Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb.
CC Warsame iyo C/kariin Guuleed ayaa ku booriyay hogaanka Galmudug, Odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta inay ka shaqeeyaan xal u helida dagaalka dib uga curtay gobolka, islamarkaana miiska wadahadalka lagu dhameeyo tabashooyinka jira, ee dhaliyay gacan ka hadalka.
Ahlu Sunna ayaa dhawaan dib ugu laabatay Guriceel, waxayna degaanka Xuurshe uga dhawaaqday dagaal, iyadoo u muuqata inay isku dayayso in ay dib ula wareegto goobihii horey uga xoreysay Al-Shabaab.